Lioka 12 - Ny Baiboly
Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Lioka
Lioka toko 12
Andriamanitra ihany no tsy maintsy hatahorana - Zava-poana ny haren'ny tany - Ny tsy fanahiana izay ilaina - Ny mpanompo miambina - Ny mpitandri-pananana mahatoky - Ny hisarahan'ny olona hevitra ny amin'i Jesoa - Ny famantarana ny fotoana.
1Tamin'izay dia tafangona an'arivony maro ny olona ka efa nila hifanosy mihitsy, dia niteny tamin'ny mpianany Jesoa nanao hoe: Tandremo aloha indrindra sao voan'ny lalivain'ny Farisiana hianareo, izany hoe: ny fihatsarambelatsihy. 2Fa tsy misy takona izay tsy haseho, na miafina izay tsy ho fantatra. 3Koa izay rehetra nolazainareo tao amin'ny maizina dia ho re ao amin'ny mazava, ary izay nobitsihinareo tamin'ny sofina tao an-trano, dia hotorina eny an-tafon-trano. 4Ka izao no lazaiko aminareo sakaizako: Aza matahotra izay mahafaty ny nofo, nefa rahefa izany tsy afa-manoatra intsony; 5fa hany tokony hatahoranareo dia izao: matahotra izay manam-pahefana hamarina any amin'ny afobe rahefa novonoiny hianareo; eny, hoy izaho aminareo, matahora azy. 6Moa tsy ilavoamena va no vidin'ny fody dimy? Kanefa tsy misy hadinoina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ireny na dia iray aza. 7Fa na dia ny volon-dohanareo aza dia voaisa avokoa. Koa aza matahotra àry, fa mihoatra lavitra noho ny fody maro hianareo.
8Ary lazaiko aminareo koa fa na iza na iza haneky ahy eo anatrehan'ny olona dia hoeken'ny Zanak'olona koa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra; 9fa izay handà ahy eo anatrehan'ny olona kosa dia holavina koa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. 10Na iza na iza hanao teny manohitra ny Zanak'olona dia hahazo famelan-keloka ihany; fa izay hiteny ratsy ny Fanahy Masina kosa dia tsy hahazo famelan-keloka intsony. 11Raha entina ho any amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana hianareo, dia aza manahy izay hamalianareo na izay holazainareo, 12fa hatoron'ny Fanahy Masina anareo eo no ho eo ihany izay holazainareo.
13Tamin'izay dia nisy anankiray tao amin'ny vahoaka nanao taminy hoe: ry Mpampianatra, mba ilazao kely ny rahalahiko hizara ny lovanay amiko. 14Fa hoy Jesoa taminy: Ralehilahy ô, iza moa no nanendry ahy ho mpitsara na ho mpizara aminareo? 15Ary hoy izy tamin'ny olona: Tandremo tsara sao azon'ny fahihirana hianareo, fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahan'izay ananany. 16Dia nanao fanoharana tamin'izy ireo izy ka nanao hoe: Nanan-tany nahavokatra be ity lehilahy mpanan-karena anankiray, 17ka velona eritreritra toy izao: Inona re no hataoko, fa tsy manan-toerana hamoriako ny vokatro aho ity? 18Izao lahy no ndeha hataoko, hoy izy: horavàko ny toeram-bariko ka hanao lehibebe kokoa aho, dia hangoniko ao daholo rahefa mety ho vokatro sy fananako rehetra, 19ary holazaiko amin'ny fanahiko hoe: Ry fanahiko, manam-pananana be ampy ho amin'ny taona maro hianao ka mialà sasatra, mihinàna, misotroa, manaova fihinanam-be. 20Fa hoy kosa Andriamanitra taminy: Ry adala, anio alina ihany dia halaina aminao ny fanahinao, ka ho an'iza àry izay novorinao? 21Toy izany ny olona izay manangon-karena ho an'ny tenany ihany, fa tsy mba mihary eo amin'Andriamanitra.
22Dia hoy Jesoa tamin'ny mpianany: Noho izany dia lazaiko aminareo fa aza manahy izay hanina hivelomanareo, na izay fitafiana hitafian'ny vatanareo; 23fa ambony noho ny hanina ny aina, ary mihoatra noho ny fitafiana ny tena. 24Diniho ange ny goaika e: tsy mamafy izy na mijinja, ary tsy manan-trano fitahirizan-kanina, na toeram-bary, fa Andriamanitra no mamelona azy, ka moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va hianareo? 25Ary na dia hanahy aza hianareo, iza moa no mahay mampitombo ny halavany iray hakiho akory? 26Koa raha ny kely indrindra aza tsy efanareo, ahoana no anahianareo ny zavatra hafa? 27Diniho koa ange ny fanirin'ny lisy e: tsy mba miasa na mamoly ireny; kanefa lazaiko aminareo fa na Salomona teo amin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'izy ireny. 28Koa raha toy izany àry no ampitafian'Andriamanitra ny ahitra izay eny an-tsaha anio nefa hariana any am-patana rahampitso, tsy mainka va hianareo, ry kely finoana? 29Ka aoka re hianareo tsy hikaroka izay hohaninareo na izay hosotroinareo, ary aza be ahiahy foana; 30fa ny jentily amin'izao tontolo izao no manahy ny amin'izany rehetra izany. Fantatry ny Rainareo anie fa ilainareo izany e. 31Koa katsaho àry aloha ny fanjakan'Andriamanitra, dia homena anareo ho fanampiny izany rehetra izany.
32Aza matahotra, ry ondry vitsy, fa efa sitraky ny Rainareo ny hanome anareo ny fanjakana. 33Amidio izay anananareo ka anaovy fiantrana; manaova kitapom-bola tsy tontan'ny ela ho anareo, dia rakitra tsy mety lany any an-danitra, izay tsy azon'ny mpangalatra idirana sady tsy misy kalalao manimba; 34fa izay misy ny harenareo no hisy ny fonareo koa.
35Aoka ho voahetra ny valahanareo, ary ho voarehitra ny jironareo. 36Manaova toy ny olona izay miandry ny fotoana hiverenan'ny tompony avy amin'ny fampakaram-bady, mba hamoha azy miaraka amin'izay raha vantany vao tonga sy mandondòna izy. 37Sambatra ireo mpanompo tratran'ny tompony miambina raha tonga izy; lazaiko marina aminareo fa hisikina ny tompony ka hampipetraka azy hihinana, ary ho avy hampihinana azy. 38Na tonga amin'ny fiambenana faharoa izy, na tonga amin'ny fiambenana fahatelo ka mahatratra azy manao toy izany, dia sambatra ireo mpanompo ireo. 39Ary fantaro tsara fa raha fantatry ny tompon-trano ny ora hihavian'ny mpangalatra, dia hiambina izy, fa tsy hamela ny tranony hotamìna. 40Koa mivonòna koa hianareo, fa ho avy amin'izay ora tsy hampoizinareo ny Zanak'olona.
41Dia hoy Piera taminy: Tompoko, ho anay ihany va no ilazanao izany fanoharana izany, sa ho an'ny olona rehetra koa? 42Ary hoy ny Tompo: Iza moa no mpitandrim-pananana mahatoky sy hendry izay hotendren'ny tompony hifehy ny mpanompony mba hanome azy ny anjara variny ara-potoana? 43Sambatra izany mpanompo izany raha tratry ny tompony manao tahaka izany raha avy izy. 44Lazaiko marina aminareo fa hotendreny ho mpitandrina ny fananany rehetra izy. 45Fa raha izany mpanompo izany kosa, manao anakampo hoe: Ela vao ho avy ny tompoko, ka amin'izany dia mikapoka ny ankizilahy sy ny ankizivavy izy, sady mihinana sy misotro ka mamo, 46dia ho avy amin'ny andro tsy ampoiziny sy amin'ny ora tsy fantany ny tompon'izany mpanompo izany, ka hataony rotiky ny kapoka izy, ary homeny anjara any amin'ny mpanompo ratsy. 47Izay mpanompo nahalala ny sitra-pon'ny tompony ihany nefa tsy niomana, na tsy nanao araka ny sitra-pony, no hokapohina imbetsaka; 48fa izay tsy nahalala kosa, na nanao zavatra mendri-pamaizana aza, dia hokapohina kelikely ihany. Izay nomena be no hitakiana be, ary izay nanankinana be no hadinina be koa.
49Tonga hanipy afo ety ambonin'ny tany aho, ka akory ity faniriako mba hirehetan'izany sahady! 50Ary manana batemy hanaovana batemy ahy koa aho, ka ory manao ahoana aho ambara-pahatanterak'izany! 51Moa ataonareo fa tonga hitondra fihavanana ety an-tany aho? Tsia, hoy izaho aminareo, fa fampisarahana aza. 52Satria hatramin'izao raha olona dimy an-trano iray, dia hanao andaniny, ka hifanohitra ny telo amin'ny roa, ary ny roa amin'ny telo; 53ny ray amin'ny zanany lahy, ary zanakalahy amin'ny rainy; ny reny amin'ny zanany vavy, ary ny zanakavavy amin'ny reniny; ny rafozambavy amin'ny vinantony vavy, ary ny vinantovavy amin'ny rafozany vavy.
54Dia hoy koa izy tamin'ny vahoaka: Raha vao mahita rahona avy any andrefana hianareo, dia manao hoe: Ho avy ny orana, ka avy tokoa izy; 55ary raha renareo avy atsimo ny rivotra, dia hoy hianareo: Hafana ny andro, ka tonga tokoa izany. 56Ry mpihatsaravelatsihy, hainareo fantarina ny toetry ny lanitra sy ny tany, ka ahoana àry no tsy ahafantaranareo izao andro diavintsika izao?
57Nahoana koa no tsy amantaran'ny tenanareo izay marina? 58Fa raha miara-mandeha amin'izay manana ady aminao hianao hanatrika ny mpitsara, dia ataovy izay hahafahanao aminy raha mbola eny an-dàlana hianareo, fandrao tongany any amin'ny mpitsara hianao ka atolotry ny mpitsara amin'ny mpamatotra, ary alatsaky ny mpamatotra an-tranomaizina. 59Lazaiko aminao fa tsy ho afaka ao hianao ambara-pahaloanao ny variraiventy farany indrindra. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0900 seconds